Archive du 04-août-2021
Fanendrena minisitra vaovao Miady varotra mafy ny Depiote
Nandritra ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena nanomboka omaly 03 aogositra haharitra 12 andro no nanehoan’ny Filohan’io Andrim-panjakana hevitra indray momba
Zatra ny làlan-dririnina…
Fomba fitenin’ny Malagasy hatramin’izay ny hoe: “zatra ny làlan-dririnina ka na efa fahavaratra avy no manao hitsin-dàlana”.
Jeneraly Ramakavelo “Mety misy tsy fahafaliana ao amin’ny Foloalindahy ao”
Tao amin’ny fahitalavitra Real TV Madagascar no nanehoan’ny jeneraly Ramakavelo Désiré omaly, fa mety misy tsy fahafaliana ao anatin’ny Foloalindahy ka tsy tokony hamaivanina.
Trano an-jatony no ravan’ny afoTrano an-jatony no ravaravan’ny afo nanomboka omaly tamin’ny 4 ora sy 15 minitra tany amin’ny faritra Masindrano Mananjary.
Tany eny Ankadiefajoro Andoharanofotsy Naneho ny hafaliany ireo mponina nomena azy
Taorian 'ny fidinana ifotony teny Ankadiefajoro Andoharanofotsy, fokontany Morarano Atsimondrano , izay faritra nihaviany ihany koa, nataon’ny depiote Naivo Raholdina
Findramam-bola amin’ny Banky iraisam-pirenena Mitaky mangaraharaha ara-pitantana ny depiote
Volavolan-dalàna 5 no holanian’ny parelemanta ao anatin’ny fivoriana tsy ara-potoana nanomboka omaly. Miompana amin’ilay findramam-bola 490 tapitrisa euros tamin’ny Banky Iraisam-pirenena.
Ny krizy efa mamely Mbola be vava ihany ny TGV MAPAR
“Ny Fitondrana misy ankehitriny dia mijoro ara-dalàna, nankatoavin’ny vahoaka Malagasy sy ny iraisam-pirenena, ka tsy ekena ny fikononkononana korontana na avy aiza na avy aiza
Ambatolampy Zaza tsy ampy taona nahatrarana “Film x” sy rongony
Efa tena manita-tsaina ireo zaza tsy ampy taona eto amintsika.
Ahiana ny fipoahana ara-tsosialy Ny mpitondra anefa mbola kofon’ny politika
Mihamafy ny krizy amin’ny endriny maro eto amin’ny tany sy ny Fanjakana. Milaza hampiakatra vidin’entana ny mpivarotra arina fandrehitra noho ny fidangan’ny vola alain’ny orinasam-panjakana
Halatra varavaram-by Zaza tsy ampy taona iray tratra teny Antohomadinika
Zaza tsy ampy taona iray vao 17 taona monja no saron’ ny Polisy miasa ao Antaniavo rehefa nangalatra varavaram-by teny amin’ny manodidina.
Morondava May ny fonenan’ny Filoha lefitry ny FLM
May omaly 03 aogositra tokony ho tamin'ny 7 ora hariva ny trano fonenan'ny filoha lefitra nationalin'ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM)
Jean Nirina « Tsy nisy na inona na inona vitan’ny depiote Rossy »
Namaly bontana ny publication nataon’ny depiote Rossy tao anaty tambajotran-tserasera facebook Rafanomezantsoa Jean Nirina omaly
Rock Malagasy Hametraka tantara ny tarika Green
Ho feno 35 taona atsy ho atsy ny tarika Green, izay mpiangaly Rock Malagasy isan’ny nanamarika ny taona 2000 sy ny manodidina azy tany ho any.